Izindaba - ISINGENISO AMALAMPU EZITHOMBE STUDIO
Ekushuthelweni kwezentengiso, ikakhulukazi endalweni yobuciko, singakwazi ukubona ukukhanya okuhle noma okulula. Isikhathi esiningi, sidinga ukusebenzisa imithombo yokukhanya yokwenziwa ehlukahlukene ukuze sidale ukukhanya. Nansi imithombo yokukhanya yokwenziwa evame ukusetshenziswa ezitudiyo.
Isibani se-tungsten filament: Izinga lokushisa lombala lesibani se-tungsten filament liphansi kakhulu (liphuzi), ukukhanya kuphansi, intengo ishibhile, kusinda kakhulu futhi izinga lokushisa liphezulu uma lisetshenziswe isikhathi eside, kunconywa ukulisebenzisa. namagilavu ​​angangeni ekushiseni. Indawo yomphumela wokukhanya ingalawulwa ishidi le-shading yangaphandle, futhi amanye amandla okukhipha kanye nokuhlangana kokukhanya kungalawulwa.
Isibani se-Dysprosium: Isibani se-Dysprosium isibani sokukhipha i-electronic esinokukhanya okuphezulu, ukunikezwa kombala ophezulu nokuphila isikhathi eside. Izinga lokushisa lombala liseduze nokukhanya kwelanga, ngakho ngezinye izikhathi lisetshenziswa njengethuluzi lokulingisa ukukhanya kwelanga esitudiyo.
Isibani se-Fluorescent: Ukukhanya okukhishwa isibani se-fluorescent ukukhanya okuhlakazekile, okungadala umphumela wokukhanya wemvelo kakhulu, futhi izinga lokushisa lombala lingalungiswa ngaphakathi kwebanga elithile.
Izibani ze-LED: ukukhanya okufanayo kuthambile, izinga lokushisa elilungisekayo, ngaphezu kwalokho, izibani ze-LED zinokusebenza okuhle kokulwa nokudlidliza, kodwa ukukhanya kuphansi kakhulu.
I-Flash: Umthombo wokukhanya wokwenziwa ovame kakhulu uwumthombo wokukhanya obaluleke kakhulu ekushutheni isitudiyo. Ivamise ukuba namapharamitha amahle okukhiphayo angalungiswa. Kungakha imiphumela ehlukahlukene yokukhanya ngezesekeli ezihlukahlukene ze-flash nezesekeli ze-studio.
I-Teyeleec iwuphawu oluzimele olugxile ekwakhiweni, ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekukhiqizeni, ekuthengisweni nasekusebenzeleni ukukhanya kokugcwalisa izithombe ze-LED. Ukuthembela kumishini ethuthukisiwe, ubuciko obuhle kakhulu kanye nethimba lezobuchwepheshe elichwepheshile, I-Teyeleec ithandwa futhi yanconywa iningi labathandi bokuthwebula izithombe ngekhwalithi ephezulu, engabizi kakhulu kanye nesevisi enhle yangemuva kokuthengisa. Ukuthenga amalambu ezithombe nokufunaI-Teyeleec, Ucwaningo nokuthuthukiswa kochwepheshe, ukusebenza kwezindleko eziphezulu, ukuqinisekiswa kwekhwalithi, kanye nesevisi ephelele ngemva kokuthengisa.
Isikhathi sokuthumela: Dec-24-2021 EMUVA
Gcwalisa Ukukhanya, I-Led Light Yendandatho Yezithombe, Iphaneli Led Rectangular, Abahlinzeki beLamp Dimmable, Light Panel Suppliers, Iphaneli ye-Rgb Led,